Nepal Dayari | रातको समयमा श्रीमतीलाई आफ्नै श्रीमानले घाँ’टी रे’टि’रे’टी ढु’ङ्गोले कि’चे’र बि’भत्स ह’त्या(भिडियो हेर्नूस)
रातको समयमा श्रीमतीलाई आफ्नै श्रीमानले घाँ’टी रे’टि’रे’टी ढु’ङ्गोले कि’चे’र बि’भत्स ह’त्या(भिडियो हेर्नूस)
फागुण ८, २०७८ आइतबार ३३५ पटक हेरिएको
रातको समयमा श्रीमतीलाई आफ्नै श्रीमानले घाँटी रेटिरेटी ढुङ्गोले किचेर बिभत्स हत्या(भिडियो हेर्नूस)
पछिल्लो समय हाम्रो देश नेपालमा ह”त्या”हिं”सा जस्ता ज”घ”न्य अ”प”रा”धका घटनाहरुले च”र”म सि”मा पार गरिरहेका छन । द”र्द”ना”क एवम ड”र”ला”ग्दा ह”त्याका घटना पनि पछिल्लो समय सामान्य बिषय बन्दै गएका छ्न । अझ पछिल्लो समय आफ्नो हा”ड”ना”ताभित्र नै ह”त्याका घटना बढ्दै गएका छ्न । आखिर यस्ता घटना बढ्नुले के को संकेत गर्दैछ त ? के हाम्रो देशको कानुन नै फि”त”लो भएर हो त ? आजको घटना पनि यस्तै ड”र”ला”ग्दो ह”त्याकै रहेको छ ।
झापा जिल्लाको भद्रपुर नगरपालिका वडा नम्बर लाहुरेचोक नजिकै एकदमै ड”र”ला”ग्दो घटना घटेको छ । अमर बहादुर तामाङ नाम गरेका श्रीमानले आफ्नै श्रीमती निता लिम्बुलाई घरभित्र नै घाँटी रे”टि”रे”टी र १० केजिको ढुङ्गाले टाउको कि”चि”कि”ची नि”र्म”म”ता”पु”र्ब”क ह”त्या गरेका छ्न । घटनावारे घटनास्थलबाट नै जानकारी दिदै मृतकको जेठानी दिदी लक्ष्मी घिमिरे तामाङ मिडियामा आएकीछिन । सुन्दै आ”ङ जि”रि”ङ्ग हुने गरि घटेको यो घटनाले सबैलाई त्र”सि”त एवम स्त”ब्ध तुल्याएको छ ।
हत्याराको साइला दाजुकि श्रीमती अर्थात साहिलिँ भाउजूले नै ह”त्या भएको सुरुमा चाल पाएकीरहिछिन र उनि मृ”त”क देउरानिको अबस्था देखेर तीन छ”क्क नै परेको बताउँछिन । मृ”त”क बुहारी सुतेकै कोठाको अर्को खाँ”टमा सासूआमा पनि सुतेको तर उनलाई भने ह”त्या भएको बारे केही थाहा नभएको उनले बताइन । सासूआमाको कान कम सुन्ने र आँखा कम देख्ने समस्या रहेको पनि उनले बताइन । ह”त्यारा अमरबहादुर भने कामको शिलशिलामा भारतमा बस्ने गरेको घर आएको एक महिनामात्र भएको उनले बताइन ।
उनको स्वास्थ्य अवस्था पनि खासै राम्रो नरहेको उनले बताइन । हात खुट्टामा समस्या भएकोले उनि घर फर्केको उनको भनाई छ । खाँटमा र घरको भि”त्ता”मा र”ग”तै”र”ग”त रहेको उनले खुलाइन । श्रीमानश्रीमतीबिच झ”ग”डा पनि खासै नभएको उनले बताइन । यत्रो ठूलो घटना घट्दा पनि आफूले सामान्य ह”ल”च”ल पनि नसुनेको उनि बताउँछिन । मृतकको टाउको बा”ङ्गि”ए”को नाक र मुखबाट र”ग”त निस्किएको उनले बताइन । नानिहरु रुएको आवाज आइरहने हुँदा आफूलाई नानिहरु रु”ए”झै लागेको उनको भनाई छ ।